Guuleystayaasha Abaalmarinta Bulshooyinka Smart Smart ee Guddoomiyaha ayaa lagu sharfay heer sare xagga qorsheynta kobaca iyo horumarinta dhaqaalaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guuleystayaasha Abaalmarinta Bulshooyinka Smart Smart ee Guddoomiyaha ayaa lagu sharfay sida wanaagsan ee ay u qorsheeyeen kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha
Guuleystayaasha Abaalmarinta Bulshooyinka Smart Smart ee Guddoomiyaha ayaa lagu sharfay sida wanaagsan ee ay u qorsheeyeen kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha
Qaybta cusub ee 2020-21 waxay aqoonsanaysaa xeeladaha dawladda hoose ee wax ka qabashada saamaynta isbeddelka cimilada.
OLYMPIA, WA —Gov. Jay Inslee iyo Agaasimaha Waaxda Ganacsiga Lisa Brown ayaa goor dhow ku dhawaaqay 11-ka ku guuleystay Abaalmarinta Bulshooyinka Smart 2020-21. Waxaa la bilaabay 2006, Barnaamijka Abaalmarinta Bulshooyinka ee Badhasaabka Smart wuxuu sanad walba u aqoonsadaa dawladaha hoose iyo la -hawlgalayaashooda shaqo gaar ah oo lagu fulinayo Xeerka Maareynta Kobaca ee gobolka (GMA) si loo qaabeeyo koboca mustaqbalka, muhiimadda dhaqaale iyo tayada nolosha bulshooyinka daafaha Washington.
“Waxaan ku faanayaa inaan soo bandhigo koox kale oo cajiib ah oo ku guulaystayaasha Abaalmarinta Bulshooyinka Smart, mid kasta oo matalaya hoggaanka hal -abuurka iyo iskaashiga kobcin doona beelahan sanadaha soo socda,” ayuu yiri Gov. Jay Inslee.
"Ku -guuleystayaasha abaal -marintaani waxay ku daydaan hab -dhaqameedyada ugu wanaagsan oo ay si fudud ula qabsan karaan bulshooyinka kale," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. "Shaqadoodu waxay muujineysaa sida qorshaynta fekerka leh ee ka-qaybgalka dadweynaha ee xooggan ay u dhisi karto aragti la wadaago iyo wax-ku-iibsi waxqabad macno leh mudnaanta iyo mashaariicda muhiimka ah ee xoojinaya bulshooyinka."
Guuleystayaasha abaalmarinta sannadkan, oo laga soo xulay 16 magacaabid oo ay soo saareen guddi garsoorayaal ah, ayaa diiradda lagu saaray guulaha laga gaaray dhinacyada kobcinta shaqada, horumarinta dhaqaalaha, awood u lahaanshaha guryaha, hoy la'aanta, jardiinooyinka iyo madadaalada, gaadiidka, horumarinta subarea iyo, cusub sannadkan, xeeladaha isbeddelka cimilada .
Abaalmarinta Smart Vision si loo helo qorshe dhammaystiran, qorshaha subarea ama siyaasadaha qorshaynta gobolka oo dhan.
Qorshaha ku-guulaysiga abaal-marinta Airway Heights ee qorshaha subarea wuxuu ujeedkiisu yahay inuu kor u qaado hoyga iyo horumarinta isticmaalka isku-dhafan ee badhtamaha magaalada iyo hareeraha Waddada 2 ee Maraykanka.
City of Airway Heights-Airway Heights Qorshaha Xaafad-hoosaadka. Qorshahan ayaa looga golleeyahay in lagu horumariyo hoy-gelinta iyo horumarinta adeegsiga isku-dhafan ee badhtamaha magaalada iyo waddada Waddada Maraykanka 2. Garsoorayaashu waxay xuseen in hagaha aagga ganacsiga ee la cusboonaysiiyay iyo heerarka horumarinta ay si cad u muujinayaan in qorshahani ka faa'iideysan doono bulshada sida xawliga ah u koreysa: “Airway Heights is a magaalo yar oo u guureysa magaalo weyn oo qorshahani wuxuu si caqli gal ah ugu darayaa guryaha dhexe ee maqan, wuxuu dejiyaa filashooyin macquul ah, wuxuuna ku dhisaa qorshayaasha jira, taas oo tusaale u ah bulshooyinka kale ee sida xawliga ah u koraya. ”
Magaalada Kent - Rally the Valley: Kent Valley Manufacturing/Center Industrial Subarea Plan. Rally Valley waxay doonaysaa inay wax ka qabato saamaynta teknolojiyadda is -beddesha, is -beddelka warshadaha, siyaasadaha adeegsiga dhulka ee duugoobay iyo caqabadaha maaliyadeed ee Dooxada Kent iyada oo loo marayo yoolal, siyaasado, mashaariic iyo barnaamijyo u jihaysan aragtida bulshada. Aragtida magaalada ayaa xustay “Dooxada Kent waxaa loo aqoonsaday inay tahay deegaan warshadeed oo kobcaya, dhaqaale ahaan adkaysi u leh, xarun ganacsi wax soo saar leh iyo meel caafimaad leh oo la jecel yahay in laga shaqeeyo.”
Abaalmarinta Mashaariicda Smart loogu talagalay mashruuc fulinaya qorshe dhammaystiran.
Guuleystaha Abaalmarinta “Mashruuca Smart”, magaalada Waqooyiga Bend, waxay qaadaysaa hab cusub oo ah “code-ku-saleysan” hab dib-u-kobcinta ganacsiga badhtamaha magaalada si loo sugo mustaqbalkiisa meel bulsho, dhaqan iyo madadaalo.
Magaalada Waqooyiga Laab-Xeerka Ku-saleysan Foomka ee Magaalada. Mashruuca Aagga Ganacsiga ee Waqooyiga Bend Downtown Commercial waxaa ku jiray koodh ku salaysan foom cusub oo ujeeddadiisu tahay inay gacan ka geysato dib-u-horumarinta si ay ugu habboonaato dabeecadda bulshada iyo inay siiso ikhtiyaarro guryeyn oo dheeraad ah. Xeerka ku-saleysan foomku waa xeerka horumarinta dhulka ee hal-abuurka leh oo kobciya natiijooyinka la saadaalin karo iyo natiijo dadweyne oo tayo sare leh iyada oo la adeegsanayo qaab jireed, halkii laga sooci lahaa adeegsiga, oo ah mabda'a abaabulka ee xeerka. Mashruucan wuxuu kor u qaadi doonaa aagga badhtamaha magaalada wuxuuna sugi doonaa mustaqbalkiisa meel bulsho, dhaqan iyo madadaalo.
Magaalada harada Stevens - Qorshaha Downtown Lake Stevens Subarea. Mashruucan socda, oo taageero ka helaya mas'uuliyiinta la doortay, shaqaalaha, la -taliyayaasha iyo xubnaha bulshada, wuxuu tilmaamayaa "fikradaha aasaasiga ah" si loo abuuro badhtamaha magaalada oo firfircoon oo is -beddel leh oo sharfaya wixii la soo dhaafay oo eegaya mustaqbalka. Iyada oo la adeegsanayo falal ula kac ah, magaaladu waxay billowday hirgelinta qorshaha subarea sannadkii 2017 waxayna xustay in ay ahayd “shaqo jacayl” si dib loogu soo nooleeyo badhtamaha badhtamaha xarunta madaniga ah iyo meelaha ay bulshadu isugu timaaddo dadka deggan iyo booqdayaashu maanta. Garsoorayaashu waxay xuseen in mashaariicda ku taxan Downtown Lake Stevens Subarea Plan ay sii wadaan inay helaan mudnaanta iyada oo loo marayo maalgelinta maxalliga ah iyo ballanqaadka, halkii ay ku xirnaan lahayd deeqaha. Tani waa hal sabab oo ay ku heshay Abaalmarinta Mashaariicda Casriga ah ee Guddoomiyaha 2020-21.
Degmada Chelan waxay isku dubariday magaalooyin badan, waaxyaha gobolka ee Ecology iyo Ganacsiga, iyo ganacsiyada ay ka mid yihiin kuwa qashinka qaada iyo kuwa dib -u -warshadaynta ah, oo loogu talagalay abaalmarintan Mashruuca Smart.
Degmada Chelan iyo magaalooyinka Wenatchee, Chelan, Cashmere, Entiat, Leavenworth - Chelan County Facility Facility iyo Qorshayaasha Qashinka adag iyo Qorshayaasha Qashinka. Mashruucan waxaa isku dubariday dhammaan magaalooyinka iyo gobolka, iyo sidoo kale waaxyaha gobolka ee Ecology iyo Ganacsiga. Ganacsiyada ayaa sidoo kale ka qaybqaatay horumarinta, oo ay ku jiraan kuwa qashinka qaada iyo kuwa dib -u -warshadaynta. Garsoorayaashu waxay ku baaqeen in dib loo adeegsado qorshaha, kaas oo magacaabista mashruuca lagu yiri: Degmada Chelan waxay leedahay durdurro aad u qurux badan, buuro iyo aagagga lama -degaanka ah ee madadaalada iyo dalxiiska. Anagoo si nabadgelyo ah ugu wareejinayna qashinka meel qashin ah oo dib loo isticmaalo, waxaan sidoo kale dadka ka wacyi gelineynaa waxyeelada qashinka sunta ah haddii uu ku daato deegaanka. Ka -hortaggu aad buu uga kharash yar yahay nadiifinta goobta brownfield. Ka dib markii ay soo diyaariyeen qorshaha, maamulada kale ayaa codsaday inay u adeegsadaan tusaale ahaan beelahooda.
Abaalmarinta Iskaashiga Smart loogu talagalay mashruuc dadweyne oo wadajir ah oo fuliya qorshe dhammaystiran.
Magaalada Renton - Willowcrest Townhomes. Mashruucan waxaa loo aqoonsaday inuu yahay hal -abuurnimo iskaashi, maalgelin iyo naqshadeyn. Iyada oo lala kaashanayo Homestead Community Land Trust, Maamulka Guryaha Renton, iyo aasaaska Bangiga JP Morgan Chase, Renton wuxuu abuuray tamartii ugu horreysay ee qoys-eber badan leh iyo horumarin lahaansho guri oo joogto ah oo la awoodi karo ee Degmada King wuxuuna hirgeliyaa Qorshaha Beddelka Aagga Qorraxda ee 2016. Garsoorayaasha ayaa ku tilmaamay shaqadan inay tusaale u tahay kuwa kale ee raadinaya inay bilaabaan mashaariicda diiradda saaraya cimilada iyo shaqada caddaaladda deegaanka.
Abaalmarinta Xeeladaha Guriyeynta Casriga ah loogu talagalay qorshayaasha hal abuurka, siyaasadaha, barnaamijyada iyo/ama falalka.
Magaalada Lacey-Qorshayaasha Qaybta Degenaanshaha Qalabka Dheeraadka ah ee Hore loo Ansixiyay. Ujeedada loo siinayo dadka deggan Lacey qorshayaasha hoyga raashinka dheeraadka ah ee hore loo ansixiyey (ADU) ayaa ah in la sameeyo si degdeg ah oo raqiis ah si loo dhiso. Waxaa soo saaray naqshadeeye, qorshayaasha bilaashka ah ayaa loo heli karaa qof kasta si uu u isticmaalo, oo ay ku jiraan awoodaha kale ee doonaya inay hagaajiyaan horumarka ADU. Waxa xusid mudan shaqada ay magaaladu ku dhammaystirtay hay'adaha amaahda maxalliga ah si ay ula wadaagaan macluumaadka iyo aqoonta ku saabsan naqshadihii hore loo ansixiyay si loogu oggolaado waqti ay ku go'aamiyaan sida ugu wanaagsan ee ay u siin karaan maaliyad dadka deggan ee danaynaya. Tani waxay muujinaysaa fursadaha loogu talagalay horumarinta xaafadaha jira, waxayna si cad u fulinaysaa yoolalka iyo shuruudaha GMA iyo sidoo kale ujeeddooyinka maxalliga ah. Ku -daridda ADU -yada xaafadaha hore waxay siisaa cufnaanta dabacsan, dayactirka dabeecadda xaafadda iyo helitaanka adeegyada ganacsi ee u dhow. Bixinta noocyo guryo kala duwan oo u dhow gaadiidka, dugsiyada iyo adeegyadu waa ahdaafta muhiimka ah ee qorshaha guryeynta guud ee magaalada. Marka lagu daro kaydinta la taaban karo ee wakhtiga iyo lacagta, dheefta dheeraadka ah ee qorshayaashii hore loo ansixiyey ayaa si weyn hoos ugu dhacday waqtiga dib u eegista oggolaanshaha sababta oo ah diiradda ayaa ku jirta dib-u-eegista qorshaha goobta. Dib -u -eegista xeerka dhismaha iyo tamarta ayaa aad u yar maxaa yeelay qorshayaashu waxay leeyihiin shuruudahaas oo loogu talagalay iyaga oo leh dhawr xulasho oo la xulan karo. Kharashyada naqshaduhu waxay noqon karaan ilaa 10% kharashyada mashruuca, taas oo milkiilayaasha guryaha iyo kuwa wax dhisa ay hadda badbaadin karaan ama geli karaan kharashyada dhismaha.
Qabiilka Jamestown S'Klallam wuxuu ku casuumay soo -saareyaasha guryaha, guryaha weelka xamuulka iyo kuwa xamuulka si ay u muujiyaan sida badeecooyinkooda hal -abuurka ahi u daboolaan baahiyaha bulshada iyo yoolalka ku habboonaanta, tayada iyo kharashka.
Jamestown S'Klallam Qabiil - Daraasadda Xallinta Guriyeynta Qabiilka Jamestown S'Klallam. Daraasadani waxay go'aamisay shuruudaha guriyeynta ee odayaasha Qabiilka, qoysaska, qoysaska ku -meelgaarka ah iyo shaqaalaha casino iyo goobaha dalxiiska. Daraasaddu waxay samaysay wacyigelin ballaadhan oo tilmaamaysa doorbidka guryaha iyo mudnaanta si loo horumariyo bulsho badan oo ixtiraamta goobaha dhaqanka Qabiilka iyo bilicsanaanta iyada oo loo oggol yahay degganeyaasha aan ka tirsanayn Qabiilka. Garsoorayaashu waxay xuseen suuqa guryaha inuu yahay fikrad cusub oo loogu talagalay maamulada kale. Qabiilku wuxuu casuumay saddex horumariye oo aad u kala duwan oo ah aqalada, guryaha iyo weelasha xamuulka si ay ugala hadlaan awoodda badeecadooda hal -abuurka ah 'ku habboonaanta, tayada iyo kharashka si loo daboolo baahiyaha bulshada. Intaas ka dib, waxay u abuureen fikradaha horumarinta guryaha iyo qiimaynta goobta, kharashyada iyo lacagaha laga yaabo inay helaan lix ka mid ah hantida Qabiilka iyagoo adeegsanaya natiijooyin laga soo ururiyey kooxaha diiradda, kooxaha shaqada, sahanka qoyska iyo suuqa guryaha. Daraasaddan xalka ah ayaa durba bixineysa faa'idada bulshada, taasoo dhalisay afar tallaabo oo istiraatiiji ah oo loo aqoonsaday inay si dhaqso ah u bilaabato Qabiilku iyo furitaanka fursadaha maalgelinta iyo kheyraadka.
Abaalmarinta Xeeladaha Cimilada Caqliyeed qorshayaasha, siyaasadaha, barnaamijyada iyo/ama falalka wax ka qabanaya saamaynta cimilada bulshada.
Magaalada Olympia - Qorshaha Masterka Gaadiidka Olympia. Olympia way sii koreysaa, bulshaduna waxay u baahan tahay inay qorshayso nidaam gaadiid oo qof walba sii socodsiiya. Qorshaha guud ee gaadiidka wuxuu isku xiraa yoolalka iyo siyaasadaha qorshaha guud ee magaalada iyo qorshaha tas -hiilaadka raasamaalka ee sanadlaha ah. Kooxda qorshaynta gaadiidkooda ayaa hogaaminayay hawshan saddexda sano ah. Waxaa lagu xusay soo gudbinta magacaabista ayaa ah “qorshuhu wuxuu kaloo sahamiyaa isbedelada farsamada ee cirifka laga yaabo inay wax ka beddesho sida aan u soconno, laga bilaabo robotyada gudbiya waddooyinka dhinaceeda ilaa baabuurta madaxbannaan. Waxay baareysaa hababka dayactirka waxayna tixgelinaysaa isku xirnaanta ka dhaxeysa gaadiidka iyo sinnaanta bulshada waxayna raadisaa habab nidaamku kor ugu qaado adeegga kuwa ugu nugul. ” Garsoorayaashu waxay Olympia ku abaal mariyeen Abaalmarintii Istaraatiijiyadaha Isbeddelka Cimilada ee ugu horraysay habkan cusub ee qorshaynta gaadiidka.
Golaha Deegaanka Puget Sound (PSRC) - ARAGTIDA 2050: Qorshaha Gobolka Puget Sound Central. Waxaa qaatay shirkii guud ee PSRC bishii Oktoobar 2020 kadib geedi socod qorshayn oo socday muddo saddex sano ah, VISION 2050 waxaa ku jira siyaasado qorshayn oo kala duwan, falal iyo istaraatijiyad kobcin goboleed si loo hago sida iyo meesha gobolku u koraayo ilaa 2050. ARAGTIDA 2050 si hami leh u hagta bartamaha Puget Sound koritaanka la filayo in ka badan 1.5 milyan oo qof 30 -ka sano ee soo socda oo leh aragti iyo tallaabooyin fulin gaar ah si ay u noqdaan gobol barwaaqo ah, waara oo siman. Magaalooyinka gobolka, gobollada, Qabiilooyinka, dekedaha, wakaaladaha, ganacsiyada iyo bulshooyinka ayaa iska kaashaday inay qaataan ARAGTIDA 2050 si loogu diyaar garoobo koritaankan waxayna u noqdaan hage sii joogtaynta deegaan caafimaad qaba, bulshooyinka kobcaya iyo dhaqaale xooggan.
Magaalada Kirkland: Tuulada Totem Lake. Garsoorayaasha ayaa aad ula dhacay mashruucan, iyagoo xusey in uu yahay “u beddelidda suuqii '70-meeyadii oo loo beddelay tuulo adeegsiga isku-dhafka ah ee ku-meelgaarka ah,” iyo mashruuc maalgashi iskaashi dowladeed iyo mid gaar ahba leh. Mashruuca, oo ka kooban 336,707 cagood oo laba jibaaran oo ah goob ganacsi iyo 851 unug oo deggen, wuxuu xaqiijinayaa aragtida Xarunta Magaalooyinka Totem Lake oo laga soo qaatay Qorshaha Lake Totem ee la qaatay 2002. Garsoorayaashu waxay xuseen in mashruuca harada Totem Lake uu tusaale fiican u yahay hirgelinta muddo dheer -waxaa loo qorsheeyaa beesha.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan barnaamijka Abaalmarinta Bulshooyinka Smart Smart ee Guddoomiyaha booqo boggayaga.
Sharciga Maareynta KobacaWar-saxaafadeeddibu dhiskaAbaalmarinta Bulshooyinka SmartXoojinta bulshada
← Xafiiska Broadband ee Gobolka Washington - Barnaamijka Deeqda Navigator Dijital ah Deeqaha u dhigma ayaa loo heli karaa fursadaha maalgelinta kaabayaasha ballaarinta ee dowladda dhexe →